Soomaaliya halkay ka dhaqaaqi laadahay ”. - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Soomaaliya halkay ka dhaqaaqi laadahay ”.
Jamuuriyaddii Soomaaliya markii la dhisay 1960 , 17 sanno ka dib , 1977 waxay noqotay wadankii Afrikadda madow ugu xoog waynaa dhinaca Milateriga , dhinaca siyaasadana waxay noqotay wadankii Afrika u dooratay in ay noqoto Gudoomiyaha wadamadda u xilsaaran Afrikadda la gumaysto,sidda South-Africa , Angola , Mozambique iyo Zimbabwe iyo qaar kale .
Hadaba hadii muddo 17 sanadood ah Somaaliya heerkaa ku gaadhay , 19 sanadood ayaa kasoo wareegay markii C/qaasim Salaad Xasan , loogu doortay in uu noqdo Madaxwaynaha Soomaaliya Wadanka Djabouti 25-Ogost 2000, ilaa yawmunaa haadaana waxay awoodi kari wayday in ay ku filaato ilaaladda xafiiska Madaxtooyadda ee Vila Soomaaliya kaasoo ay waardiyeeyaan ciidamadda nabad ilaalinta ee midowga Afrika .
Suaasha aynu qormadan ku bilownay aynu usoo noqonee , Dawladii dhalatay 1960 , Khuboraddii dhistay ee dhaqaajisay waxay ahayd Somaliland haday noqon lahayd , Tacliinta , Maaliyadda , Maamulka , Ciidamadda iyo Diblomaasiyadda , halka wax ka dhaqaaqi laayihiin waa maqnaanshaha Somaliland ka maqan tahay , haddii Mogdisho ku dhegtay ictiraafkii , Hargaysina waxay la guurtay caqligii , karis xun iyana wax kula
Ahmed Nur Gurije